About Us - IdathaKit Studio ne-osos-data-recovery.com
Mayelana neNkampani yeDathaKit Software
IdathaKit Studio etholakala ngasekupheleni kwe-2014, izibophezela ukuhlinzeka ngazo zonke izinhlobo zesoftware application. Sisebenzela futhi ekutholeni amathuluzi esoftware amangalisayo afana ne-iPhone Data Recovery, i-Android Data Recovery, Ucingo Lokubuyisela Isistimu, Isikreqo Soku screen nokunye okuningi kuyeza.
ios-sata-recovery.com isayithi elisungulwe i-DataKit Studio. Siyafisa ukuthi abantu bajwayele ukusebenzisa kakhulu izingcingo zabo. Ngakho ukuphepha kweDatha ocingweni kuya ngokuya kubaluleke kakhulu. Siyethemba ukukunikeza okukhokhisa ngakho.
U-Ian noJason basebenza ezinkampanini ezisebenza ngobuhlakani futhi bacabanga ukuthi sifuna ukwenza ushintsho futhi benze into abayithandayo. Ngakho-ke, saba nenkulumo futhi sanquma ukukhetha isoftware ethile esiyithandayo.
IdathaKit Studio yasungulwa futhi ihlose kwi-Software Utility Software. Sithokozela idatha kakhulu ocingweni futhi sethemba ukuthi abasebenzisi bethu ngeke balahlekelwe amafayela abo ayigugu.
Sethula imikhiqizo eminingi ku-ios-data-recovery.com kufaka i-iPhone Cleaner, i-iPhone Transfer, Shintsha iSelula Transfer ne-Android Transfer.